Warbixin SOLJA- Ma Cabsibaa, Ma Aqoon La’aan-baa, Mise Hilmaan? Falanqayn Kooban: Saxafi, Siciid Khadar Aw Cabdillaahi. |
Warbixin SOLJA- Ma Cabsibaa, Ma Aqoon La’aan-baa, Mise Hilmaan? Falanqayn Kooban: Saxafi, Siciid Khadar Aw Cabdillaahi.
Hargeisa(GNN):Warbixinta Ururka Solja uu sannad walba soo saari jiray, waxay ahaayeen oo ujeedadeedu ahayd, inay ka waramaan Xaalada dhabta ah ee ay ku sugan yihiin Saxafiyiinta reer Somaliland. Waa warbixin ka hadasha:
• Xadhigii Sannadka ee lagula kacay Saxafiyiinta Dalka, sida tirada iyo sababta.
• Xaalada dhaqan-dhaqaale ee Saxaafada
• Baaqyo kala duwan oo loo dirayo wadamada deeq bixiyayaasha iyo ururada caalamiga ah ee saxaafada iyo kuwa xoruyatul qawlka daneeya ,si ay wax uga qabtaan tacadiyada loo gaystay Sannadkaa Saxaafada Madaxa bannaan ee Dalka.
Ayaan darada dhacday waxay tahay, hogaanka SOLJA, waxay sannadkan soo saareen Warbixin taa ka duwan. Waa warbixin siday u dhan tahay “Maasha Allaah” ah. Waa warbixin ay ka buuxdo xaqiraad iyo dulmi si toos ah loogula kacay wax-qabadka Hogaanadii ka horeeyey ee talada soo qabtay 12kii sanno ee hore. Waa Warbixin indhaha ka lalinaysa Dulmiga, Tacadiga, Xadhiga iyo Xayiraada lagu hayo Saxafiyiinta Dalka. Waa warbixin ku faanaysa inay qabteen Sannadkan tababaradii ugu badnaa ee SOLJA qabatay tan iyo intay jirtay. Waa warbixin ku faanaysa inay SOLJA soo gaadheen dhaqaalihii ugu badnaa ee Solja la siiyo intay jirtay.
Waa run oo Sannadkan, waxa la siiyey Saxaafada tababaradii ugu badnaa. Balse, in lagu faano waa laga qurux badnaa sababtoo ah, tababaradaasi waxay u badnaayeen kuwo ka hadlayay aas aaska Saxaafada (basic journalism) sidaan filayo shan cisho ayay socdeen kuwooda u badani, mana lahayn intooda badani wax shahaado ah. Dad badan ayaana rumaysan inay isku dhaantay tababar kaliya oo laba Sanno ka hor Baanka Adduunku Saxaafada u qabtay. Tababarkaasi oo socday 7 Maalmood Saxaafada lagu tababarayay qaabkay u soo badhigayaan Warbiximaha la xidhiidha Dhaqaalaha oo shahaadooyin Caalamiya Saxaafada la siiyey.
Waa run oo waa run, hoos way u dhacday Xadhiga Saxafiyiinta, balse taasi waa sabab la isla yaqaano. Is waydiintuse waxay tahay hogaankan isku mashxaraday warbixintoodu ma Xaalada Xafiiskooday kaga sheekeenayeen mise Xaalada Dalka oo dhan (Saylac ilaa Laascaanood )
Waana laga yaabaa inay dhaqaale badani soo galeen, inkastoo aan la haynin wax-qabad u dhigma xadiga lacagtaasi soo gashay oo ka muuqda SOLJA.
Marka aanay meel-na kaga qornayn Tacadiyada loo gaystay Saxafiyiinta ee Sannadkaan. Ma ilawshiyay ka tahay mise waa ka itaal, inaanay sheegi karin Xayiraada saaran Wargeysyada Haatuf oo xadhigiisu laba jirsaday iyo Hubsad oo dhawaan ahayd. Ma ishay ka lalinayaan, ma ka ilawshiiyaa mise waa ka itaal inaanay meel-na kaga qornayn wax kale ha joogtee, dhaawacyadii maalinta cad loo gaystay Guddoomiyaha Wargeyska Codka shacabka Axmed Muuse Sakaaro.
Marka aanay meel-na kaga qornayn baaqyo loo dirayo Deeq-bixiyayaasha, Ururada u dooda Xuquuqda Aadamaha iyo xoriyada hadalka si ay wax uga qabtaan tacadiyada jira, maxaynu ku macnaynaa? Mise waxa jira qayb kale oo ka mid ah Warbintan isla markaana ay intan aynu sheegnay kaga hadli doonaan oo anigaa ka deg degay ama ka hor dhacay?
Haddii aan runta laysku sheegaynin! Haddii aynaan xaqiiqda ka hadlaynin, malaha waxa wanaagsanayd in layska aamuso, haba lagu tuhmee.
Waa qoraal ka tarjumaya, dareen dhabta ah oo ka soo maaxaya Maskaxda shaqsi lexo-jeclo badan ka qaba Horumar uu ku tallaabsado urur ku hadlaya Magaciisa kana tarjumaya ujeedooyinkiisa. Waa shaqsi ka hadlaya aragti Caafimaad qabta oo uu ku cabirayo urur uu u samaystay inuu ka hadlo xaaladiisa dhabta ah iyo inuu Ummada gaadhsiiyo dhawaaqiisa togan iyo taban-ba Isla markaana uu meesha ka saaro dhibta haysata iyo baahiyihiisa gaarka ah.
Saxafi, Siciid Khadar aw Cabdillaahi